Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Akụkọ ụlọ nkwari akụ: Libby's Hotel and Baths, New York, NY
omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ụlọ nkwari akụ na ịsa ahụ nke Libby
N'ọgwụgwụ 1920s, ahịa ngwaahịa na -arị elu, azụmaahịa na -enweta uru ndekọ yana ndị mmepe na -ewu ụlọ ọhụrụ n'ike n'ike.
Ụlọ ọrụ ndị na-agbazinye ego mgbazinye ego bidoro inye ndị nwere ego mgbazinye ego, ụdị itinye ego ọhụrụ.
Otu n'ime ụlọ ọhụrụ ahụ bụ ụlọ nkwari akụ Libby nke dị okpukpu iri na abụọ, nke e wuru na 12 n'akụkụ akuku Chrystie na Delancey n'okporo ụzọ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ New York.
Ọ bụ ụlọ nkwari akụ mbụ nke ndị Juu niile nwere ebe igwu mmiri mara mma, mgbatị ahụ nke oge a, ịsa ahụ ndị Russia-Turkish na ebe ezumike dị maka obodo niile.
Onye nrụpụta ahụ bụ Max Bernstein, onye si Slutzk, Russia kwabata, ya na ezinụlọ ya rutere New York na 1900 mgbe Max dị afọ 11. Okporo ụzọ ebe Max toro na mpaghara ala ọwụwa anyanwụ juputara na ndị na-ere ụgbọ ala, ụfọdụ nwere ụgbọ ịnyịnya na-adọkpụ, ụmụaka na-egwu egwuregwu n'okporo ụzọ na ndị bi n'ụlọ obibi na-akpakọrịta na stoops. O di nwute, mgbe nne ya Libby nwụrụ n'ime otu afọ, Max gbapụrụ n'ụlọ wee rahụ n'abalị n'obere ogige dị nso. N'ime afọ ndị sochirinụ, Max kwuru na nrọ ya nke iwu ụlọ nkwari akụ Libby n'akụkụ Chrystie na okporo ụzọ Delancey bịakwutere ya n'abalị ahụ.
Mgbe ọtụtụ afọ nwechara ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, nke ọ bụla n'ime ha akpọrọ Libby's, Max nwere ike nweta ala n'akụkụ ọ kacha amasị ya ebe o wuru ụlọ nkwari akụ mepere na Eprel 5, 1926. O doro anya na Max bụ onye mgbasa ozi sitere n'ọmụmụ n'ihi na ọ tinyere ego. ike na ego pụrụ iche na mgbasa ozi nkwado sara mbara n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na-asụ asụsụ Yiddish kwa ụbọchị. N'ụbọchị mmeghe, the New York Times sonyere n'akwụkwọ ndị ọzọ n'ịkọ akụkọ nnukwu mmeghe ahụ. Ụlọ nkwari akụ Libby nwere ọmarịcha ụlọ elu nwere okpukpu abụọ nke nwere akwa plasta nwere ụcha mara mma na-akwado ya site na ogidi mabụlrị. Ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ụlọ nzukọ, ụlọ ịgba bọọlụ na ụlọ nri kosher abụọ. Max nwere mmemme ọrụ ebere na klaasị maka ụmụaka agbata obi.
Mgbasa ozi Libby Hotel sitere na redio Yiddish mbụ, WFBH (site na elu nke westside Hotel Majestic) nke na -egosi ndị na -eme ihe nkiri a ma ama, ihe nkiri ndụ na ihe ọkụ dị ka Sol Hurok, Rube Goldberg na George Jessel. Bernstein ahapụla ihe ọ bụla, na-ewere ọrụ dị ka onye ntụzi egwu ya Josef Cherniavsky, onye ndu otu Yiddish-American Jazz Band nke a makwaara dị ka onye Juu Paul Whiteman. N'ime afọ abụọ mbụ ya, ụlọ nkwari akụ ahụ yiri ka ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma mana ka ọ na -erule ngwụsị 1928, elu ụlọ ahụ dara.
A nri nke Emeperela họtel ọhụrụ na New York. Ọtụtụ, iji wee bụrụ ihe mgbaze, malitere inye ndị Juu nri, na -ewepụ ndị ahịa Max. Max gaara enwe ike ịsọ mpi ma ọ bụrụ na ọnọdụ mmetụta uche ya anọbeghị na mgbada dị ala; na October 20, 1926, nwunye ya Sarah nwụrụ. N'ikpe ikpe ụlọ ikpe ọzọ, Max ga -agba akaebe na iru uju ọ nwetara mere ka ọ ghara ịrụ ọrụ.
Ọzọkwa, onye mbụ ji ya ụgwọ bụ American Bond and Mortgage Company (AMBAM), onye na -agbazinye ego na -akwụghị ụgwọ. Tupu ihe mberede ahịa ngwaahịa 1929, AMBAM buru amụma n'ụlọ nkwari akụ ahụ, na ọghọm dị iche iche nke akara aka, Onye isi obodo Jimmy Walker họpụtara Joseph Force Crater, onye ọka iwu jikọtara Tammany dị ka onye nnata. Dika onye ọka ikpe Crater si kwuo, ọ ga -abụ na AMBAM nwere ihe ọmụma gbasara atụmatụ obodo ịgbasa okporo ụzọ Chrystie. N'ọnọdụ ọ bụla, AMBAM kwuru ugbu a na ụlọ nkwari akụ ahụ ruru nde $ 3.2 (mgbe ọ tụchara Hotel Libby na naanị $ 1.3 nde maka mkpochapụ). Site na ngalaba ama ama, New York City weghaara ma kwụọ AMBAM nde $ 2.85. Obodo wee kwatuo ụlọ ndị dị na ngọngọ gụnyere Max Bernstein's Libby's Hotel na Baths.
Mana enwere akụkọ ọzọ. N’afọ 1931, a mara AMBAM ikpe maka ụdị atụmatụ a gbasara ụlọ oriri na nkwari akụ Mayflower dị na Washington, DC Otu Onye ọka ikpe Crater bụ onye na -anata mkpochapu Mayflower. Ọ tụfuru ọnwa anọ ka nke a na -ahụbeghị ya kemgbe. A gbasapụrụ okporo ụzọ Chrystie, nnukwu ịda mba dara na n'ikpeazụ, Robert Moses mere saịtị ahụ ka ọ bụrụ Sara Delano Roosevelt Park.
Mgbe Max Bernstein nwụrụ na Disemba 13, 1946 New York Times obituary dere, sị: "Max Bernstein, 57, onye nwe ụlọ nkwari akụ ozugbo ... wuru $ 3,000,000 Edifice na mkpọmkpọ ebe, naanị ịhụ Ememe Ncheta nye nne razed."
Nke ahụ ga -abụ njedebe nke akụkọ a na -adọrọ mmasị belụsọ na Pakn Treger* akụkọ ahụ kwuru ihe na -esonụ:
Akụkọ banyere Libby gbabara n'ọchịchịrị ruo oge ọkọchị nke 2001, mgbe akụkụ nke pavement dị n'akụkụ akuku Chrystie na Delancey Streets abanye, na -emepụta olulu mmiri. Oghere ahụ toro nke ukwuu ilo otu osisi niile wee malite ịbanye n'okporo ụzọ obodo na nnukwu ụlọ ọrụ dị nso na Sara Delano Roosevelt Park. N’ụbọchị ndị ahụ aka ha dị ọcha tupu Septemba 11, olulu mmiri yiri ka ọ bụ nnukwu ihe iyi egwu chere Manhattan ala.
Ndị injinia obodo amaghị ihe kpatara ya, ya mere ha weturu igwefoto n'ime oghere. N'ụzọ tụrụ ha n'anya, ha ruru 22 ụkwụ n'okpuru ala ha hụrụ ọnụ ụlọ na -adịghị emejupụta, nke nwere igbe akwụkwọ. Mgbe ha nyochachara ihe ndekọ na ebe nchekwa obodo, ha matara na ụlọ nkwari akụ Libby kwụ otu ebe na ha achọpụtala ụlọ n'ime okpuru ọchịchị ya. Na a New York Times Site na Septemba 11, 2001, e hotara kọmishọna ogige New York City Henry J. Stern na -ekwu, "Ọ na -echetara m Pompeii."
N'adịghị ka Pompeii, ọ dịghị mbọ a na-eme iru ụlọ ahụ ma ọ bụ igwupụta ya. Ndị injinia obodo ahụ họọrọ ịjuju ya na ahịhịa, na-eli ụlọ ahụ na ihe omimi ya. A kụrụ osisi ọhụrụ, rụzie ogige ahụ.
* “Ritz with a Shvitz” nke Shulamith Berger na Jai ​​Zion dere, Pakn Treger, Mmiri 2009